လီဗာပူး Vs ဇဲလျဘု ၊ လိုငျလီ Vs ခြဲလျဆီး တို့ရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျတှကေို ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ ခြာလီနဈကိုးလပျဈ - Sports Myanmar
ခြာလီနဈကိုးလပျဈ က လီဗာပူး အသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျဘကျ ရကျဘူးဇဲလျဘု အသငျး အတှကျ အရမျးကို တောငျ့တငျး လှနျးတယျ ဆိုတာကို ပွသ နိုငျလိမျ့မယျလို့ ထောကျခံ ပွောဆို သှားခဲ့ပွီး ခြဲလျဆီး ကတော့ လိုငျလီ မှာ စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈရ လိမျ့မယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ဦးဆောငျ နသေူ လီဗာပူးဟာ ယနညေ့မှာ သွစတီယနျ ကလပျ ဇဲလျဘု အသငျးကို အနျဖီးမှာ လကျခံ ကစား သှားရမှာ ဖွဈပွီး မာဆေးဆိုကျ ကလပျဟာ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစု အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ နာပိုလီ အသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ထားခဲ့ ပါတယျ။
ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဇှနျလ က မကျဒရဈ မှာ တော့တငျဟမျကို ၂-၀ နဲ့ နိုငျကာ ခနျြပီယံလိဂျ မှာ ဗိုလျစှဲ ထားတဲ့ အသငျး ဖွဈပွီး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာလညျး ရ ပှဲ ကစားထားပွီး ခြိနျမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူး လိုပဲ ခြဲလျဆီးဟာ အုပျစု အဖှငျ့ ပှဲစဉျမှာ ဗလငျစီယာ ကို ရှုံးနိမျ့ ထားခဲ့တာ ဖွဈပမေယျ့လညျး လနျဒနျ ကလပျဟာ မနျနဂြောသဈ ဖရနျ့လမျးပတျရဲ့ လကျအောကျမှာ တဈဖွညျးဖွညျး ပိုကောငျး လာခဲ့ပါတယျ။
လိုငျလီနဲ့ ပှဲမတိုငျမီ လမျးပတျက “ဗလငျစီယာ နဲ့ ပှဲဟာ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ အဆိုးဆုံး ပှဲတဈပှဲ မဟုတျခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ တဈစုံတဈရာ ရခဲ့သငျ့ပါတယျ။ လိုငျလီဟာ လြှငျမွနျမှု ၊ အရညျအသှေးတှေ ရှိနပွေီး ခွိမျးခွောကျမှုတှေ ပေးစှမျး နိုငျတဲ့ အသငျးပါ။ ဒါဟာ သရေေးရှငျရေး ပှဲတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အခွအေနေ အားလုံးကို ခွုံကွညျ့ ရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီပှဲဟာ ကြှနျတျောတို့ အဆငျသငျ့ ဖွဈရမယျ့ ပှဲပါပဲ။”
နာပိုလီ ကို အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ပွီးနောကျ ယာဂနျကလော့က သူ့ရဲ့ လီဗာပူး အသငျး နိုငျပှဲ လမျးကွောငျးပျေါကို ပွနျလညျ ရောကျအောငျ လုပျရနျ တိုကျတှနျး သှားခဲ့ပါတယျ။
ကလော့က “ကြှနျတျောတို့ နိုငျပှဲ စတငျ ရမှာ ဖွဈမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့ အခြိနျ မဖွုနျးသငျ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ရမှတျတှေ ရယူဖို့ အတှကျ မစောငျ့ဆိုငျး နိုငျတော့ ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ အမှတျတှေ ရဖို့ လိုအပျပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
၁~ လီဗာပူး Vs ဇဲလျဘု
ရကျဘူးဇဲလျဘု အသငျး လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ အနညျးငယျက ဆဲတဈ အသငျး နဲ့ ကစား ခဲ့တာကို ကြှနျတျော မှတျမိ နပေါသေးတယျ။ သူတို့ဟာ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ၀ငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ ရဖို့ အတှကျ နှဈအနညျးငယျကွာ တညျဆောကျ ထားခဲ့ ရတာပါ။ ခနျြပီယံလိဂျ ညတှေ မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အိမျကှငျးဟာ အကောငျးဆုံး အငှအေ့သကျတှေ ပေးစှမျး နိုငျမယျ့ ကှငျးတှေ ထဲက တဈကှငျး ဖွဈလာ ပါလိမျ့မယျ။
လီဗာပူးဟာ လကျရှိ အချြိနျ လုပျစရာ ရှိတာကို အကောငျးဆုံး လုပျပွ ထားနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောသာ ယာဂနျကလော့ ဆိုရငျ ဒီပှဲ အတှကျ အပွောငျးအလဲတှေ လုပျသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဂြိုးဂိုးမကျဇျ ပွနျပါလာ နိုငျပွီး ဂြိမျးဈမီနာ ကလညျး ပှဲထှကျ ကစားသမား စာရငျးမှာ ပါဝငျ လာနိုငျပါတယျ။ အဒမျလယျလာနာ ကလညျး အခှငျ့ အရေး ရလာနိုငျ ပါတယျ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ လီဗာပူး အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာ နိုငျပှဲ ရမယျ့ ညတဈည ပါပဲ။
လီဗာပူး ၃-၀ ဇဲလျဘု
လိုငျလီ Vs ခြဲလျဆီး
ဒါဟာ လုံးဝကို ကမောကျကမ ဖွဈလာ နိုငျတဲ့ ပှဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖရနျ့လမျးပတျ ဒီပှဲ အတှကျ ဘယျလို ပွငျဆငျ သှားမလဲ ဆိုတာ ကြှနျတျော အရမျး သိခငျြ နပေါတယျ။ အသငျးမှာ ရှိတဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့တှေ အားလုံးကို ထညျ့သှငျးဖို့ ဘယျအခြိနျမှာ အသငျ့တျောဆုံးလဲ? အကယျ၍ သူ ဒီလို လုပျခငျြတယျ ဆိုရငျ အိမျကှငျး ပှဲစဉျမှာသာ ပိုလုပျခငျြ ပါလိမျ့မယျ။ ကောငျးမှနျတဲ့ အနအေထားကို ရောကျရှိ လာခဲ့ပွီးနောကျ သူ့အနနေဲ့ အပွောငျးအလဲနဲ့ မေးခှနျးထုတျမှုတှေ လိုခငျြမှာ မဟုတျပါဘူး။
သူ့အနနေဲ့ ဒီအတှကျကွောငျ့ မာကြောကဈြလဈတဲ့ လူစာရငျးကိုသာ အသုံးခြ သှားပါလိမျ့မယျ။ လိုငျလီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ နိဈ နဲ့ အဝေးကှငျးမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကခြဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ၎င်းငျးတို့ဟာ အမှတျပေးဇယား ရဲ့ အဆငျ့လေး နရောမှာ သကျတောငျ့သကျသာ ရပျတညျ နပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒါဟာ ခြဲလျဆီး အတှကျ စမျးသပျမှု တဈခု ဖွဈလာ မှာပါ။ ကြှနျတျော ကတော့ ဒီပှဲစဉျ ကတော့ ခြဲလျဆီး တို့ တဈစုံတဈရာ ရလာနိုငျတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပိုမို အတှအေ့ကွုံ ကွှယျဝတဲ့ ခြဲလျဆီး အသငျးကိုသာ ကြှနျတျောတို့ ကှငျးထဲမှာ မွငျတှေ့ ရပါလိမျ့မယျ။
လိုငျလီ ၁ – ၁ ခြဲလျဆီး
လီဗာပူး Vs ဇဲလ်ဘု ၊ လိုင်လီ Vs ချဲလ်ဆီး တို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ ချာလီနစ်ကိုးလပ်စ်
ချာလီနစ်ကိုးလပ်စ် က လီဗာပူး အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ဘက် ရက်ဘူးဇဲလ်ဘု အသင်း အတွက် အရမ်းကို တောင့်တင်း လွန်းတယ် ဆိုတာကို ပြသ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထောက်ခံ ပြောဆို သွားခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီး ကတော့ လိုင်လီ မှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ရ လိမ့်မယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဦးဆောင် နေသူ လီဗာပူးဟာ ယနေ့ညမှာ သြစတီယန် ကလပ် ဇဲလ်ဘု အသင်းကို အန်ဖီးမှာ လက်ခံ ကစား သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး မာဆေးဆိုက် ကလပ်ဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ နာပိုလီ အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ထားခဲ့ ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဇွန်လ က မက်ဒရစ် မှာ တော့တင်ဟမ်ကို ၂-၀ နဲ့ နိုင်ကာ ချန်ပီယံလိဂ် မှာ ဗိုလ်စွဲ ထားတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာလည်း ၇ ပွဲ ကစားထားပြီး ချိန်မှာ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲ ရရှိ ထားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး လိုပဲ ချဲလ်ဆီးဟာ အုပ်စု အဖွင့် ပွဲစဉ်မှာ ဗလင်စီယာ ကို ရှုံးနိမ့် ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း လန်ဒန် ကလပ်ဟာ မန်နေဂျာသစ် ဖရန့်လမ်းပတ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုကောင်း လာခဲ့ပါတယ်။
လိုင်လီနဲ့ ပွဲမတိုင်မီ လမ်းပတ်က “ဗလင်စီယာ နဲ့ ပွဲဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အဆိုးဆုံး ပွဲတစ်ပွဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ရာ ရခဲ့သင့်ပါတယ်။ လိုင်လီဟာ လျှင်မြန်မှု ၊ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ပေးစွမ်း နိုင်တဲ့ အသင်းပါ။ ဒါဟာ သေရေးရှင်ရေး ပွဲတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေ အားလုံးကို ခြုံကြည့် ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲဟာ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ရမယ့် ပွဲပါပဲ။”
နာပိုလီ ကို အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီးနောက် ယာဂန်ကလော့က သူ့ရဲ့ လီဗာပူး အသင်း နိုင်ပွဲ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်လည် ရောက်အောင် လုပ်ရန် တိုက်တွန်း သွားခဲ့ပါတယ်။
ကလော့က “ကျွန်တော်တို့ နိုင်ပွဲ စတင် ရမှာ ဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အချိန် မဖြုန်းသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရမှတ်တွေ ရယူဖို့ အတွက် မစောင့်ဆိုင်း နိုင်တော့ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အမှတ်တွေ ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
၁~ လီဗာပူး Vs ဇဲလ်ဘု
ရက်ဘူးဇဲလ်ဘု အသင်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းငယ်က ဆဲတစ် အသင်း နဲ့ ကစား ခဲ့တာကို ကျွန်တော် မှတ်မိ နေပါသေးတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရဖို့ အတွက် နှစ်အနည်းငယ်ကြာ တည်ဆောက် ထားခဲ့ ရတာပါ။ ချန်ပီယံလိဂ် ညတွေ မှာတော့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ကွင်းဟာ အကောင်းဆုံး အငွေ့အသက်တွေ ပေးစွမ်း နိုင်မယ့် ကွင်းတွေ ထဲက တစ်ကွင်း ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
လီဗာပူးဟာ လက်ရှိ အချိ်န် လုပ်စရာ ရှိတာကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပြ ထားနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်သာ ယာဂန်ကလော့ ဆိုရင် ဒီပွဲ အတွက် အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုးဂိုးမက်ဇ် ပြန်ပါလာ နိုင်ပြီး ဂျိမ်းစ်မီနာ ကလည်း ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှာ ပါဝင် လာနိုင်ပါတယ်။ အဒမ်လယ်လာနာ ကလည်း အခွင့် အရေး ရလာနိုင် ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လီဗာပူး အတွက် သက်တောင့်သက်သာ နိုင်ပွဲ ရမယ့် ညတစ်ည ပါပဲ။
လီဗာပူး ၃-၀ ဇဲလ်ဘု
လိုင်လီ Vs ချဲလ်ဆီး
ဒါဟာ လုံးဝကို ကမောက်ကမ ဖြစ်လာ နိုင်တဲ့ ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖရန့်လမ်းပတ် ဒီပွဲ အတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင် သွားမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် အရမ်း သိချင် နေပါတယ်။ အသင်းမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေ အားလုံးကို ထည့်သွင်းဖို့ ဘယ်အချိန်မှာ အသင့်တော်ဆုံးလဲ? အကယ်၍ သူ ဒီလို လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်မှာသာ ပိုလုပ်ချင် ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီးနောက် သူ့အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ လိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူ့အနေနဲ့ ဒီအတွက်ကြောင့် မာကျောကျစ်လစ်တဲ့ လူစာရင်းကိုသာ အသုံးချ သွားပါလိမ့်မယ်။ လိုင်လီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ နိစ် နဲ့ အဝေးကွင်းမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၎င်းတို့ဟာ အမှတ်ပေးဇယား ရဲ့ အဆင့်လေး နေရာမှာ သက်တောင့်သက်သာ ရပ်တည် နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် စမ်းသပ်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာ မှာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲစဉ် ကတော့ ချဲလ်ဆီး တို့ တစ်စုံတစ်ရာ ရလာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုမို အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကိုသာ ကျွန်တော်တို့ ကွင်းထဲမှာ မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
လိုင်လီ ၁ – ၁ ချဲလ်ဆီး